पीवीसी इंजेक्शन मोल्डिंग मेसिन - चीन पीवीसी इंजेक्शन मोल्डिंग मेशीन आपूर्तिकर्ता,कारखाना YHYSIONIMM
घर » उत्पादनहरू » प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिनहरू » पीवीसी इंजेक्शन मोल्डिंग मेसिन
पीवीसी Prefor इंजेक्शन मोल्डिंग मेशीन को विशेषताहरु
1. पीवीसी इंजेक्शन मेशिन विशेष रूपमा पीवीसीको लागि डिजाइन गरिएको हो, UPVC, सीपीवीसी, पीवीसी पाउडर र द्वि-मिश्र धातु स्क्रू & ब्यारेल. अपरेशनको बखत, स्थिर तापमान स्थिर रहन्छ ताकि सामग्री चार्ज दर बढेको छ. यसले अत्यधिक कुशल प्लास्टाइजिंग रेट र स्थिर इंजेक्शनको साथ उच्च गुणस्तरको उत्पादनको पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्छ.
2. यो उच्च-टोर्सन / कम-रोटेशन हाइड्रोलिक पम्पको साथ विन्यास गरिएको छ, जसले कुशल मोल्डिंग क्षमता मात्र सुनिश्चित गर्दछ, तर यसले चिसो समय र सामग्री खपत लाई कम गर्दछ.
PVC Preform Injection Molding Machines द्वारा उत्पादन उदाहरण
पीवीसी / पीपीआर फिटिंग को लागी विशेष इन्जेक्शन मोल्डिंग मेशीन
3. कडा पीवीसी मोल्डका लागि डिजाइन गरिएको, यसले प्लेट धातुलाई चौडा गर्न सक्छ, र सुविधाजनक मोल्ड स्थापना प्रदान गर्नुहोस्. यसै बीच, यसले लागत कम गर्नका साथै अपरेटरको व्यक्तिगत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ.
4. PVC prefor इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिनले ठोस अवस्थाको रिले अपनाउँछ ठीक तापमान नियन्त्रण गर्न.
5. कोर-पुलिंग एकाइहरूको दुई समूहहरू लागू गरियो.
6. आयातित चर पम्प वा सर्वो ड्राइव नियन्त्रणको अपनयन ऊर्जा बचत उल्लेखनीय बनाउँदछ.
7. प्रशंसक र हावा कभर सामग्री को तापमान विचलन वृद्धि गर्न को-काम.
8. कोर-पुलिंग र स्टेनलेस स्टील स्क्रूको बहु सेटहरू वैकल्पिक हुन्छन् जब वांछनीय पीवीसी प्रीमियर इन्जेक्शन मोल्डिंग मेशिनहरू छनौट गर्दछन्।.